Archive du 20181029
Asa fa tsy kabary ny an-dRavalo Efa vonona ny “kits scolaires”
Marolambo, Fandriana, Ambositra, Ambinanindrano, Ambohimahasoa, Mahasoabe, Sahambavy, Mahatsinjony, Fianarantsoa … no nanaovan’ny Kandida laharana faha-25 fampielezan-kevitra ny sabotsy lasa teo.
Hetsika ho an’ny tena fanovana Mitaky ny famoahana an’i Pety Rakotoniaina
Nanao fanambarana ry zareo avy eo anivon’ny hetsi-bahoaka ho an’ny tena fanovana sy ny fanorenana ifotony ny sabotsy teo fa tsy rariny ny fisamborana natao tamin’ny mpitarika ity hetsika ity,
Fifidianana filoham-pirenena Hatrehana afaka 10 andro ny fihodinana voalohany
Na dia maneho ny fahavononana tanteraka amin`ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin`ny 7 novambra ho avy izao ny rehetra dia misy kosa ireo manakantsakana ny hirosoana amin`izany.
Praiminisitra Ntsay Christian “Tsy tokony hatao takalonaina ny raharaham-pirenena”
Manoloana ny fampitandremana na “ultimatum” 72 ora napetraky ny firaisankinan`ny kandidà nandritra ny fivoriambe ho an`ny fiandrianana ny alakamisy lasa teo dia nanao antso avo ny praiminisitra Ntsay Christian ny amin’ny tsy tokony hanaovana takalonaina ny raharaham-pirenena,.
Dinan’ny fifampitondran’ireo kandida Sasa-poana ireo namolavola azy
Namoaka ny tatitra mikasika ny fanarahan’izy ireo maso ny fanajan’ireo kandida ho filoham-pirenena ny dinan’ny fifampitondran’ireo kandida ny komitin’ity dina ity.
Hentitra Ravalomanana “Manohitra ny herisetra atao amin’ny vahoaka aho”
Tohina tamin’ny herisetra efa tena miverimberina natao ny mpanohana azy teto Antananarivo ny Kandida Marc Ravalomanana, izay nitarika ny fahafatesan-dRazanaboahangy Marie Augustine na Neny,
Andry Rajoelina Fa hanao inona any Frantsa indray ?
Nandao an’i Madagasikara halina ka nihazo an’i Paris renivohitr’i Frantsa i Andry Rajoelina.
Korontana aorian’ny fifidianana Mananontanona indray
Tsy azo lavina aloha izany hatreto fa tsy tomombana ny fanomanana ny fifidianana ho filoham-pirenena. Na ny filohan’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI,
Aleoko mitsotsotra !
Miarahaba anao tsy maty fo aman’aina aho ry Jean ! Arahabaiko koa ilay namanao iray.
Hazo mahagaga eto Madagasikara Manodidina ny 3.000 isa
Nisy ny famelabelaran-kevitra narahana adihevitra nifampizaran’ilay mpandinika ny tontolo Malagasy, Eris Rabedaoro, ireo harena sarobidy raketin’ireo ala eto Madagasikara ny faran’ny herinandro teo tetsy amin’ny IKM Antsahavola.
Basikety Malagasy Tompondaka 2018 ny MB2All sy ny COSPN
Nifarana tanteraka tamin’ny fanatanterahana an’ireo famaranana N1 A lahy sy vavy tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina omaly alahady 28 oktobra ny taom-pilalaovana 2018 ho an’ny taranja basikety baolina Malagasy.
Tontosa tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina omaly alahady 28 oktobra 2018 ny fifaninana kick boxing “FANTOMAS” andiany faha-2 nokarakarain’ny fikambanana’ireo mpanorina ny taranja kick boxing eto Madagasikara.
Hanangana ady amin’ny vahoaka…
Folo andro mialohan’ny fifidianana isika amin’izao fotoana izao. Miha mafana ny toe-draharaha, raha tarafina amin’ny resaka fampiasan-kery samihafa, toy io ataon’ireo efa nilaza azy ho matanjaka ka efa nahavita nanao amboletra naka fahefana tsy tamin’ny fomba ara-demokratika io, 9 taona lasa izay.
Fanasana fiara amin’ny sisin-dalana Tena manimba ny arabe
Hanasazy ireo mpanasa fiara amoron-dalana tsy ara-dalàna rehetra ny kaominina Antananarivo Renivohitra manomboka izao.
Sprinter nilatsaka tany anaty hantsana Olona 4 no indray namoy ny ainy
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina tany amin’ny lalam-pirenena fahafito ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 3 ora maraina.
Loza mahatsiravina tany Mandalahy Tafiakatra 7 ny maty
Anisan'ireo namoy ny ainy tamin'ilay lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona sy naharatrana maro tao Camp Mandalahy (anelanelan'Ambohimahasoa sy Fianarantsoa) ny marainan’ny sabotsy 27 oktobra lasa teo ny tovolahy vao erotrerony fantatry ny maro amin’ny hoe Boy Black Hasim.
MITSOAKA ANY ANATY ALA
Saika ny iray tanàna no indray nitsoaka any anaty ala noho ny fatahorana ny valifatin’ny polisy.
Fanisana mponina sy trano fonenana Ao anatin’ny fotoana farany hamoaham-bokatra
Manoloana ny fanangonam-bokatry ny fanisana fahatelo eto Madagasikara (RGPH3) dia nanambara ny injeniera tompon’andraikitra eo anivon’ny INSTAT, Andriamitsara Tarzan, fa efa miditra amin’ny fitanàna an-tsoratra farany izy ireo.
Tanora manampahaizana Mitombo isa ireo mirona amin’ny asa tenany
Betsaka ireo tanora tsy mihevitra ny handalina fianarana akademika lavabe intsony aorian’ny fahazoany ny maripahaizana Bakalôrea fa mirona avy hatrany any amin’ny fanofanana arak’asa.
Tetibolam-panjakana 2019 Hodinihana amin`ity herinandro ity
Ao anatin`ny fivoriana ara-potoana faharoa ataon`ireo parlemantera isika amin`izao fotoana. Raha ny fantatra dia anisan`ny mibahana ao anatin`ny fandaharam-potoana amin`ny ankapobeny amin`ity herinandro ity ny fandinihana ny tetibolam-panjakana hampiasaina amin`ny taona ho avy.
Fiovaovan’ny toetr’andro sy ny fahasalamana Mila misotro rano betsaka ny tsirairay
Mihamahazo vahana eto amintsika hatrany ny fiovaovan’ny toetr’andro efa am-bolana izao.